संसारकै अनौठो विवाह १०३ वर्षका कर्नेलले भित्र्याए ६६ वर्ष कान्छी बेहुली ! - Gaunbeshi
संसारकै अनौठो विवाह १०३ वर्षका कर्नेलले भित्र्याए ६६ वर्ष कान्छी बेहुली !
३० चैत्र २०७६, आईतवार ११:१८
एजेन्सी , । मानिसको जिवनमा विवाह सबैभन्दा महत्वपूर्ण मोड हो । विवाहमा रोजिने जिवनसाथीसंग ब्यवहार र मन मिल्यो भने जिवन सरल बन्छ नत्र असामान्य बन्छ । नेपाली समाजमा त झन विवाहलाई सात जुनिको सम्बन्ध मानिन्छ । विवाहमा सामान्यतया पति पत्नीको उमेरको फरक कति हुन्छ होला रु
सामान्यतया १, २, ५ वा बढीमा १० वर्ष सम्म । कतिपय जोडीको २० वर्षको उमेर फरक भएपनि सामान्य मानिन्छ । विवाहको उमेर पनि २१ देखि ३५ वर्षको उमेरमा सामान्यतया मानिसले विवाह गरिसकेका हुन्छन् । कतिपयको ३५ भन्दा माथिका उमेरका ब्यक्तिको विवाह पनि सामान्य हुन थालेको छ ।
यदाकदा कतैकतै ४० वर्षपछि पनि विवाह हुने गरको देखिएको छ । तर कोहि मानिसले एक शताब्दी भन्दा बढिको उमेरमा पुगेर विवाह गर्ला रु त्यो पनि आफुभन्दा झण्डै ७ दशक कान्छीसँग । यसलाई भने सामान्य मान्न सकिदैन । इण्डोनेसियाको साउथ सुलावेसीका निवासी १०३ वर्षका वृद्धले आफुभन्दा ६६ वर्षीय कान्छी महिलासंग विवाह गरेर संसारलाई चकित पारेका छन् ।
१०३ वर्षका पुवागं कट्टेले ३७ वर्षीय इण्डो अलंगका साथ विवाह गरेका हुन् । उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यी दुईको विवाहको तस्बिर उनका आफन्तले सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको हो । धेरैले यस विवाहका बिषयमा आलोचना गरेका छन् ।
स्थानीय सञ्चारका अनुसार पुवांग रिटायर्ड डच कर्नेल हुन् । उनले सन् १९४५–१९४९ को यु द्ध ल डे का थिए । जतिवेला उनी यु द्धमा थिए त्यसबेला उनकी दुलही इण्डो जन्मेकि समेत थिइनन् ।
विवाहमा उमेरको फरक त छदै छ, अझ यसमा दाइजोको प्रथा समेत जोडिएको छ । यस विवाहमा बेहुली पक्षले बेहुलालाई दाइजो समेत दिएन। पुवांगले इण्डोसंग विवाह गर्ने बेहुली पक्षलाई करीब ४० हजार रुपैया र एउटा सुनको औंठी दिई विवाह गर्न मनाएका थिए । विवाहपछि नवजोडी पुवांगको निवासमा बस्दै आएका छन् ।
फेरि अर्का पूर्व गोरखा सैनिकको कोरोनाका कारण निधन